Waxaa jira tobanaan kun oo dadka isticmaala dunida oo dhan in ka fool arrinta khasaaro xog ku saabsan kaararka SD iyo qalab kale. Sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in qalabkii oo lacag la'aan ah u yihiin sahamiyey si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday oo aan wax arrintan oo ka kaaftoomi sameeyo. In tutorial this 10ka qalab lacag la'aan ah soo kabashada xogta la sahmin doonaa si ay u iftiiminaya users ah oo ku saabsan mawduuca waa faahfaahsan.
Dib u eegista software kabashada card 10 xusuusta Top
Waxaa xaqiiqo ah in dhalashada jacaylka user si aad u hesho lacag la'aan ah oo sidaas daraaddeed qalabka kabashada software free waxaa lagu qeexay sida hoos ku qoran:
Waxaa shaki la'aan waa barnaamijka ugu fiican in hubiyaa inuu ka soo kabsado xogta aan wax arrintan iyo dhibaato. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay wax dib u dhac aad u hesho natiijooyinka ugu fiican aan.
• file exe Small
• Easy in ay isticmaalaan iyo download
• Download page ee ku dhiirigelinayaan in uu yahay mid aad u wareer
• Waxa kale oo ay isku dayayo in lagu daro qaababka kale ee aan xitaa weydiinaya user.
2. Puran kabashada file
Barnaamijku waa mid aad u fudud in ay bartaan iyo user inay hubiyaan in ay cajaladaha iyo files waxaa la marsiiyey degdeg ugu weyn sida marka la barbar dhigo kooxda ay xafiiltamaan kale ee arrintan la xiriira ka dhigi kara. Barnaamijku waxa uu sidoo kale waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan marka ay timaado soo kabashada.
• Waa la jaan qaada OS kasta
• file download waa yar oo iftiin miisaan.
• The isticmaala shirkadaha waxaa la dayacay sida barnaamijka waxaa kaliya loogu talagalay dadka isticmaala guriga.
3. gaardi digsi
In ay barnaamij lacag la'aan ah software this bixisaa badan in dadka isticmaala ay. User ma laha in ay bixio casriga ah ee arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay oo waa waxa ugu wanaagsan.
• Barnaamijka waxaa la socon kara oo dhan nidaamka file.
• Waxaa jira fursad u soo kabashada xogta aan xad lahayn oo isticmaalaya barnaamijkan.
• Macluumaad tayada file waxaa marnaba muujiyey
Waa doorasho ka wanaagsan marka loo eego barnaamijyada kale ee soo kabashada file ay sabab u tahay interface in uu yahay mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo uu helo natiijada ugu wanaagsan u isticmaala sida users farsamo oo aan sidoo kale ka faaiidaysan karaan ka.
• Barnaamijku waa yar ee size
• folder iyo fikradaha nooca file waa fudud
• file Mudanayaasha ayaa la socotid barnaamijyada kale ee software
• Kaliya ee isticmaalka ganacsiga aan ahayn.
5. kabashada Pandora
Dhab ahaantii barnaamijkan u baahan yahay hordhac jirin sidii loo qiimeeyo ee u fiican oo dhan. Shaqeynta saaxir waa inuu xaqiijiyo in barnaamijka ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin sidoo kale file ku soo celiyay mar ma gudahood oo dhan helo.
• hab saaxir waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan
• qalabka Multiple waxaa taageera waqti isku mid ah
• bogga dajinta waa wax yar isreebreeb
• Barnaamijka waxaa jirtey in lagu daro toolbar browser
6. file kaamil ah oo nugul
Barnaamijku waxa uu si gaar ah loogu talagalay ilaalinta ee aragtida baahida iyo baahida macaamiisha iyo sabab la mid ah waxa aad u fududahay in la isticmaalo inuu ka soo kabsado faylasha. Barnaamijkan ayaa laga cabsado exe ah kaliya 500KB.
• Dhulku qaadi karo
• yaryar ee sida size ku saabsan 1MB markii lagu rakibay.
• files lama previewed karo
• caafimaadka file tirtiray marna shaaca ka qaaday
7. Maraykanka fududee kabashada xogta
Barnaamijka ayaa loogu talagalay si loo hubiyo in drives USB ah waxaa la siineyaa mudnaanta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aad u hesho natiijooyinka ugu fiican mar barnaamijka ayaa lagu rakibay.
• Waxa aad u fududahay in la isticmaalo
• Nidaamka Falanqeynta file ayaa gundhig
• kabashada xogta ayaa ku koobnayn
• Cabbirka barnaamijka uu aad u ballaaran
8. kabashada xogta falsan
Iyada oo ku saleysan qaab-dhismeedka sahamisa daaqadaha barnaamijka hubiyaa in files waxaa lagu arki gudahood gal ah in lagu heli karaa guddi bidix. Barnaamijku waa fududahay in la isticmaalo ay sabab u tahay sifooyinka ugu wanaagsan gundhig:
• rakibo waa dhab deg deg ah
• kabashada file Multitasking waa suurto gal
• Qaab-dhismeedka folder wuxuu ku siinayaa khaladaad ah ee files shaqsi
• Waxaa la horumariyo oo kaliya OS daaqadaha.
9. Soo Celinta
La socosho leh u gaar ah barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan. The fududahay in la isticmaalo hab ka dhigaysa in xitaa qurux badan:
• interface waa fududahay in la isticmaalo
• Barnaamijka wuxuu qaataa meel disk aad u yar
• The soo kabsado fursadaha aan jirin
• Ma la socon daaqadaha 8.
10. kabashada xogta ADRC
Waxaa loo sameeyay dadka celcelis ahaan user computer barnaamijka ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan si ay u hubiyaan in arrinta la xalin marka ay timaado soo kabashada xogta.
• Easy in ay isticmaalaan oo ay fahmi karaan
• helay files badan waqti isku mid ah
• interface ma aha user saaxiibtinimo aan users casriga ah
• Barnaamijka weyn yahay in size sida ku saabsan 1.5GB
Kabashada File Puran
Kaamil ah oo nugul
Noo fududee kabashada Data
Kabashada falsan Data
Kabashada ADRC Data
The Wondershare kabashada xogta waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo qalabka ugu horumarsan oo loo isticmaali karo in arrintan la xiriira iyo user rating sidoo kale waa heer sare ah marka ay timaado shaqeynayaan. In kastoo bixiyo barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in dib u soo kabashada xogta loo sameeyaa oo taageero ka helaya Wondershare ma jirtaa in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Barnaamijka ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin sidoo kale yimaado lacag ah oo dib damaanad 30 maalmood taas oo muujinaysa in ay ku dhiirigelinayaan in uu tahay mid aad kalsooni ku saabsan barnaamijka ay tahay in la soo saaro. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo sida ay tilmaamaha ee isticmaala. Barnaamijka waxaa labadaba laylis ah iyo sidoo kale casriga ah ee isticmaala bixio iyo qaababka isku waxaana lagu in nabadeeyaan labada fasalada. Sida marka la barbar dhigo barnaamij kor ku qalab tani waa 100 jeer ka badan lagu talinayo.
> Resource > Memory Card > Top 10 xusuusta FREE software kabashada card